Umzimveliso weSikuta semoto - Abavelisi beeSikuta zombane zeSikuta, abaXhasi
Ibhetri ye-EcoReco ihlawulwe kwangaphambili ukuya kwi-50% ngaphandle kwebhokisi ukulungiselela wena ukuze ukwazi ukuyikhwela kwangoko.
Sebenzisa itshaja ye-EcoReco ukuphinda uyitshaje ibhetri xa ibhetri ifunda kwideshibhodi iphantsi. Eyona ndawo isebenzayo ukuhlawulisa iphakathi kwe-1-4 bar. Iibhetri zeLiFePO4 azinampembelelo kwimemori.
Lindela ukuba ibhetri ihlawuliswe ukusuka kwinto engenanto ukuya kwi-80% ngeyure ezi-2 (kucetyisiwe) okanye ukusuka ekungabinanto ukuya kugcwele kwiiyure eziyi-4.5.
1. Qinisekisa ukuba isithuthuthu sicinyiwe, emva koko uvule isiphelo sokugqibela ngaphezulu kwesokethi yokutshaja ecaleni kwesitishi sokukhaba.
2. Qhagamshela itshaja kwiplagi setyhula kwisokethi yokutshaja yesikuta, emva koko uqhagamshele itshaja 3 prong plug kwindawo yokuphuma yombane.
3. Ibhetri iyabiza xa itshaja i-LED ibomvu. Itshaja ye-LED ijika iluhlaza xa izele ngama-85%. Ungaqhubeka nokuhlawulisa isithuthuthu kwaye usiphakamise ngaphezulu kweeyure eziyi-1-2 ukuba ziyafuneka. Ukuyeka ukutshaja, nceda ususe
iplagi yesi-3 yeprong kwindawo yokuphuma yombane, emva koko susa iplagi setyhula kwisokethi yokutshaja yesikuta. Vala ikepusi yokuphela.
Iprofayili yomkhweli: Le scooter yombane yabantwana ilungile ilungele abantwana abancinci ukuba bakhwele kufutshane. Yenzelwe ngokukodwa abakhweli abaneminyaka esi-8 nangaphezulu. Ubunzima obukhulu bunqunyelwe kwi-50kg.
Imoto kunye neTrottle: Ulondolozo olusezantsi kunye nokuhamba ngenyawo okuthe cwaka okuqale ngeemoto eziqhutywa ngamabhanti, ukuya kuthi ga kwi-7 MPH. Ukukhawulezisa, nyathela isithuthuthu kwaye usebenzise isantya samaqhosha ukukhawulezisa.
Ibhetri kunye nokutshaja: inikwe amandla yibhetri ekhokelayo ye-asidi ehlala ixesha elide, isithuthuthu sabantwana sinokuhamba kangangeekhilomitha ezi-7 ukuya kwezi-5 ngentlawulo enye. Kubandakanya itshaja.
Amavili kunye neziqhoboshi: Amavili aqinileyo angama-intshi ama-6 anikezela ukuqhuba ngokutyibilikayo nokugudileyo, ngelixa unyathela ngonyawo lwasemva lukhupha umbane, ukwenza ukupaka kukhuseleke kwaye kube lula.
Isakhelo kunye nokutyibilika: Isakhelo se-aluminium engasindi yesikuta sombane sabantwana kulula ukuhambisa nokugcina. Xa ibhetri iphela, sijika sibe sisithuthuthu, esinokukhwela ngaphandle kokuxhathisa kwaye sigcine kumnandi.
1. Isikuta sombane sihanjiswa sihlanganiswe ngokupheleleyo sisenziwa ngumenzi.
2. Ibhetri ihlawulwe kwangaphambili ukuya kwi-50% ngaphandle kwebhokisi ukulungiselela wena.
3. Isikuta sombane sihamba ngeendlela zovavanyo zokukhwela kunye nokuhlawulisa imijikelezo kumzi-mveliso ngeenjongo zokuqinisekisa umgangatho. Ideshibhodi inokubonisa imijikelezo embalwa yokutshaja kunye neemayile ezihanjisiweyo ngomhla wokufunyanwa kwazo.